Sativa Coin စျေး - အွန်လိုင်း STV ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Sativa Coin (STV)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Sativa Coin (STV) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Sativa Coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
STV – Sativa Coin
Market ကဦးထုပ်: $36 592.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Sativa Coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Sativa Coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Sativa CoinSTV သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.0152Sativa CoinSTV သို့ ယူရိုEUR€0.0129Sativa CoinSTV သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.0116Sativa CoinSTV သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.0139Sativa CoinSTV သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.138Sativa CoinSTV သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.096Sativa CoinSTV သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.339Sativa CoinSTV သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0569Sativa CoinSTV သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.0203Sativa CoinSTV သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.0212Sativa CoinSTV သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.34Sativa CoinSTV သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.118Sativa CoinSTV သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.0823Sativa CoinSTV သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹1.14Sativa CoinSTV သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.2.55Sativa CoinSTV သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.0208Sativa CoinSTV သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.023Sativa CoinSTV သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.474Sativa CoinSTV သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.106Sativa CoinSTV သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥1.61Sativa CoinSTV သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩18.07Sativa CoinSTV သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦5.75Sativa CoinSTV သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽1.12Sativa CoinSTV သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.42
Sativa CoinSTV သို့ BitcoinBTC0.000001 Sativa CoinSTV သို့ EthereumETH0.00004 Sativa CoinSTV သို့ LitecoinLTC0.00027 Sativa CoinSTV သို့ DigitalCashDASH0.000163 Sativa CoinSTV သို့ MoneroXMR0.000167 Sativa CoinSTV သို့ NxtNXT1.1 Sativa CoinSTV သို့ Ethereum ClassicETC0.00224 Sativa CoinSTV သို့ DogecoinDOGE4.45 Sativa CoinSTV သို့ ZCashZEC0.000175 Sativa CoinSTV သို့ BitsharesBTS0.602 Sativa CoinSTV သို့ DigiByteDGB0.576 Sativa CoinSTV သို့ RippleXRP0.0535 Sativa CoinSTV သို့ BitcoinDarkBTCD0.00053 Sativa CoinSTV သို့ PeerCoinPPC0.0529 Sativa CoinSTV သို့ CraigsCoinCRAIG7 Sativa CoinSTV သို့ BitstakeXBS0.655 Sativa CoinSTV သို့ PayCoinXPY0.268 Sativa CoinSTV သို့ ProsperCoinPRC1.93 Sativa CoinSTV သို့ YbCoinYBC0.000008 Sativa CoinSTV သို့ DarkKushDANK4.93 Sativa CoinSTV သို့ GiveCoinGIVE33.28 Sativa CoinSTV သို့ KoboCoinKOBO3.62 Sativa CoinSTV သို့ DarkTokenDT0.014 Sativa CoinSTV သို့ CETUS CoinCETI44.37